Ciidanka Xoogga Soomaaliya oo Howlgalo ka Fuliyo Gobolka hiiraan | Star FM
Home Wararka Soomaaliya Ciidanka Xoogga Soomaaliya oo Howlgalo ka Fuliyo Gobolka hiiraan
Ciidanka Xoogga Soomaaliya oo Howlgalo ka Fuliyo Gobolka hiiraan
Ciidanka xooggga dalka Soomaaliya Qeybta 27-aad ayaa howlgal ballaaran oo ka dhan ah Al-shabaab waxaay saacadihiia soo dhaafay ka fuliyeen deegaano ka tirsan Gobalka Hiiraan.
Deegaanada howgalka laga fuliyay waxaa ka mid ah Aboorey, Beero-yabal, Wariirey, Gal-boocale ilaa deegaanka Yasooman, kuwaasoo dhammaantood hoostaga degmada Buulo burde ee Gobalkaasi Hiiraan.
Howlgalka ayaa qeyb ka ah howlgalka sida guud uu ciidanka xoogga dalku uga wadaan deegaanada Maamulka Hirshabeelle oo Al-shabaab lagu doonayo in looga saaro degaannada ay kaga sugan yihiin Maamulka Hir-Shabeelle.
Taliyaha Qeybta 27-aad ee Ciidanka Xooga dalka Soomaliyeed General Axmed Maxamuud Maxamed (Tareedisho) oo hor kacayay howlgalka ayaa sheegay inay guul weyn ka gaareen, isla markaana degaano dhowr ah ay kala wareegeen dagaalameyaasha Al-shabaab.
Previous articleDHAGEYSO:Musharaxa maayarka Hargaysa oo beeniyay inuu mudaharaad abaabulayo
Next articleGolaha imtixaanada qaran ee KNEC oo hoggaamiye cusub yeeshay